← विश्व कै कम उमेरकी गायिका नेपालमा!	अग्नी एअरको विमान दुर्घटना/चालक दलसिहत सबै १४ जनाको मृत्यु, →	यस्तो थियो ५०० वर्षअघिको काठमाडौं	21
धरहराको तस्वीर । अहिले धरहराको अगाडी वनेका अव्यवस्थीत भवनहरुले धरहरा नै छेक्न लागिसकेको छ । picture collection by rabin thapaliya १२ हजारभन्दा बढी घरधुरी
पुरानो अवस्थाको टुडिखेलको तस्वीर सहर सुरक्षाका लागि गेट
पुरानो अवस्थाको न्युरोड यस्तो थियो । आज मानिसको घना चापले गर्दा न्युरोडमा खुट्टा टेक्ने ठाँउ सम्म वाँकी छैन् । सम्मान गर्ने प्रचलन
आरोग्यशालामा उपचाररामदत्त पन्त
त्यतिवेला सबै रोगको उपचार आरोग्यशालामा हुन्थ्यो । डाक्टर हुन्थो वैद्यराज । जडिबुटीकै भर थियो औषधोपचारको । बालमृत्युदर बढी थियो । कम्तीमा पनि एकदर्जन बच्चा जन्माउँदा एक-दुईजना मात्रै बाँच्थे । मानिस बलिया हुन्थे । रोग पनि धेरैखाले थिए । तर, सबै रोग प्राकृतिक उपचारले निको हुन्थ्यो । उमेर घर्केपछि बच्चा जन्माउने चलन थियो । ८१ वर्षको उमेरमा हरिलाल पाण्डेले छोरा भवानी पाण्डे जन्माए । भवानीले ‘मुद्रा राक्षस’ नामक पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए । बाहुनक्षेत्रीे सेलरोटी, दालभात र मासु खान्थे भने नेवारी राजकाजमा धेरखाले परिकार हुन्थे । तराईबाट परबर, भान्टा झिकाउँथे शासक । काठमाडौंमा त्यतिवेला आलु तथा काउली पनि पाइँदैनथे Like this:Like Loading...
← विश्व कै कम उमेरकी गायिका नेपालमा!	अग्नी एअरको विमान दुर्घटना/चालक दलसिहत सबै १४ जनाको मृत्यु, →	One response to “यस्तो थियो ५०० वर्षअघिको काठमाडौं”	biru subedi	जुलाई 22, 2010 at 1:58 अपराह्न	i want to read this book, about nepal how to…. ? plz sent me mail